Tontolon’ny Hip Hop – Samaritan: “Tsy natao hitadiavam-bola fa fanabeazana ny Rap” | NewsMada
Eo am-piketrehana ny rakitsary “Fankasitrahana”, vokatra faharoa ao aorian’ny “Antsirabe 113″, nivoaka ny taona 2016 i Samaritan. 15 taona niseharana teo amin’ny tontolon’ny mozika Rap ny lehilahy. Anisan’ny manavanana an’i Samaritan ny fampivadiana ny Rap amin’ny kanto malagasy ka namoaka ny “Rap semi- acoustique”, mampiasa gitara sy valiha, sns.” Rehefa hanao ihany, aleo manao zavatra tena mipetraka tsara (tonony, feony, fandrindrana) mba ho voninahitry ny tenanao aloha ka hametraka izany amin’ny maha ianao anao… Tsy ilaina ny manivaiva ny ataon’ny hafa fa matokisa ny zavatra ataonao. Tsy hitadiavako vola na laza ny Rap fa fanabeazana ny fiarahamonina “, hoy i Samaritan.
Ahitana rindrantsary (clip) valo eo ho eo ilay raikitsary kasainy havoaka. « Mbola eo am-panamasahana ny nahandro tanteraka isika amin’izao ka ho hita eo ihany ny tohiny. Nosafidina manokana ny lohaten’ito rakitsary ito ka natao hoe “Fankasitrahana”, satria ahitana karazana fanomezam-boninahitra ny rehetra. Fankasitrahana ny Avo, fisaorana mitafotafo ho an’ireo loharano nipoirana ary toraka voninkazo ho an’ny mpankafy sy ” mpiondana” Rap eto Madagasikara”, hoy hatrany i Samaritan.
Efa maro ny sehatra nandraisany anjara sy nanehoana ny maha izy azy teo amin’ity tontolo ity. Anisan’ireny ny “Rap fiesta”, tao amin’ny Alliance française Antsirabe, ny taona 2007. Ny “Fetin’ny mozika” tany Mahajanga ny taona 2017, sns. Manana eritreritra ny handeha lavitra eo amin’ny mozika i Samaritan. Iray amin’izany ny haneho ny talentany ivelan’i Madagasikara.
« Tsy maty ny Rap, fa miankina amin’ny mpanao azy ihany io. Raha mbola misy aho tsy ho faty ny zavatra ataoko. Ny zavakanto rahateo tsy ho faty izany fa eo foana… », hoy i Samaritan.